ဘန်လေရဲ့ စပွန်ဆာနာမည်ကလည်း ရိုမေးနီးယားလိုဆိုရင် တစ်မျိုးဖြစ်သွားတာကိုး
22 Sep 2018 . 4:53 PM
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဘန်လေအသင်းရဲ့ အခြေအနေက တကယ့်ကို စိတ်ပျက်စရာ။ နိုင်ပွဲမရှိ၊ ရမှတ် (၁)မှတ်နဲ့ အမှတ်ပေးဇယား အောက်ခြေမှာ နားခိုနေရတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေဆိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာက သူတို့ရဲ့ အင်္ကျီစပွန်ဆာ ကုမ္ပဏီနာမည်ကြောင့်များလား။ ဘန်လေအသင်းကို အင်္ကျီစပွန်ဆာပေးထားတာက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး လောင်းကစားကုမ္ပဏီ Laba 360 လို့ အမည်ရတယ်။ ဘန်လေအသင်းဟာ ဒီရာသီ အစမှာပဲ အဲဒီကုမ္ပဏီနဲ့ ပေါင်သန်းနဲ့ချီ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Laba ဆိုတာက တရုတ်ဘာသာနဲ့ ဆိုရင် “ကံကောင်းမှုတွေ ယူဆောင်လာခြင်း “လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်(မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ လာဘ်လာဘဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ နီးစပ်တာပေါ့)။
ဒါပေမဲ့ ရိုမေးနီးယားဘာသာနဲ့ဆိုရင်တော့ အဓိပ္ပါယ်က ဆန့်ကျင့်ဘက်ပဲ။ Laba ဆိုတာက ရိုမေးနီးယားလိုဆိုရင် “ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ဖြေခြင်း”လို့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်နေတယ်။ (The Sun သတင်းစာကတော့ Masturbate ဆိုပြီး တည့်တည့်ပဲရေးထားတယ်၊ မြန်မာလို့တော့ ဘာသာမပြန်တော့ပါဘူး)။ အဲဒါကြောင့် ဘန်လေအသင်း ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ David Clark ဆိုသူက သူ့အသင်းစပွန်ဆာကုမ္ပဏီကို အခုလို နောက်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။ “ဘန်လေအသင်း အင်္ကျီသစ်ကို ၀ယ်ပြီး ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှာတော့ မ၀တ်ကြနဲ့ဗျို့၊ ဘူခါရက်မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့် အလုပ်က သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဒီအင်္ကျီကို ကြည့်ပြီး ၀ိုင်းရီကြတော့တာပဲ “လို့ Twitter မှာ ရေးသားခဲ့တယ်။
ဘန်လေအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အဆင့်(၇)နေရာမှာ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ဒီရာသီ ယူရိုပါလိဂ်ခြေစစ်ပွဲ ၀င်ခွင့် ရခဲ့ပေမယ့် သိတဲ့အတိုင်း ခြေစစ်ပွဲမအောင်၊ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်း အခုအထိ နိုင်ပွဲမရဖြစ်နေလို့ ဘန်လေ ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင် အဲဒီစပွန်ဆာကုမ္ပဏီကို မျက်စောင်းထိုးနေကြပြီ။ ဒီရာသီမှာ ဘန်လေအသင်း ရလဒ်ဆိုးနေတာက တကယ်ပဲ အဲဒီစပွန်ဆာကုမ္ပဏီ နာမည်ကြောင့်လားဆိုတာတော့ . . .
ဒီရာသီမှာ ဘနျလေ ရလဒျဆိုးနတောက အင်ျကြီစပှနျဆာ နာမညျကွောငျ့မြားလား
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဘနျလအေသငျးရဲ့ အခွအေနကေ တကယျ့ကို စိတျပကျြစရာ။ နိုငျပှဲမရှိ၊ ရမှတျ (၁)မှတျနဲ့ အမှတျပေးဇယား အောကျခွမှော နားခိုနရေတယျ။ ဒီလိုအခွအေနဆေိုးတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတာက သူတို့ရဲ့ အင်ျကြီစပှနျဆာ ကုမ်ပဏီနာမညျကွောငျ့မြားလား။ ဘနျလအေသငျးကို အင်ျကြီစပှနျဆာပေးထားတာက တရုတျနိုငျငံရဲ့ နာမညျကွီး လောငျးကစားကုမ်ပဏီ Laba 360 လို့ အမညျရတယျ။ ဘနျလအေသငျးဟာ ဒီရာသီ အစမှာပဲ အဲဒီကုမ်ပဏီနဲ့ ပေါငျသနျးနဲ့ခြီ တနျဖိုးရှိတဲ့ စာခြုပျခြုပျဆိုထားတာဖွဈပါတယျ။ Laba ဆိုတာက တရုတျဘာသာနဲ့ ဆိုရငျ “ကံကောငျးမှုတှေ ယူဆောငျလာခွငျး “လို့ အဓိပ်ပါယျရတယျ(မွနျမာလိုဆိုရငျတော့ လာဘျလာဘဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျနဲ့ နီးစပျတာပေါ့)။
ဒါပမေဲ့ ရိုမေးနီးယားဘာသာနဲ့ဆိုရငျတော့ အဓိပ်ပါယျက ဆနျ့ကငျြ့ဘကျပဲ။ Laba ဆိုတာက ရိုမေးနီးယားလိုဆိုရငျ “ကိုယျ့ဘာသာ စိတျဖွခွေငျး”လို့ အဓိပ်ပါယျထှကျနတေယျ။ (The Sun သတငျးစာကတော့ Masturbate ဆိုပွီး တညျ့တညျ့ပဲရေးထားတယျ၊ မွနျမာလို့တော့ ဘာသာမပွနျတော့ပါဘူး)။ အဲဒါကွောငျ့ ဘနျလအေသငျး ပရိသတျတဈဦးဖွဈတဲ့ David Clark ဆိုသူက သူ့အသငျးစပှနျဆာကုမ်ပဏီကို အခုလို နောကျပွောငျခဲ့ပါတယျ။ “ဘနျလအေသငျး အင်ျကြီသဈကို ဝယျပွီး ရိုမေးနီးယားနိုငျငံမှာတော့ မဝတျကွနဲ့ဗြို့၊ ဘူခါရကျမှာရှိတဲ့ ကြှနျတေျာ့ အလုပျက သူငယျခငျြးတှကေတော့ ဒီအင်ျကြီကို ကွညျ့ပွီး ဝိုငျးရီကွတော့တာပဲ “လို့ Twitter မှာ ရေးသားခဲ့တယျ။
ဘနျလအေသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပရီးမီးယားလိဂျမှာ အဆငျ့(၇)နရောမှာ အံ့အားသငျ့စရာကောငျးလောကျအောငျ ရပျတညျခဲ့ပွီး ဒီရာသီ ယူရိုပါလိဂျခွစေဈပှဲ ဝငျခှငျ့ ရခဲ့ပမေယျ့ သိတဲ့အတိုငျး ခွစေဈပှဲမအောငျ၊ ပရီးမီးယားလိဂျမှာလညျး အခုအထိ နိုငျပှဲမရဖွဈနလေို့ ဘနျလေ ပရိသတျတှကေိုယျတိုငျ အဲဒီစပှနျဆာကုမ်ပဏီကို မကျြစောငျးထိုးနကွေပွီ။ ဒီရာသီမှာ ဘနျလအေသငျး ရလဒျဆိုးနတောက တကယျပဲ အဲဒီစပှနျဆာကုမ်ပဏီ နာမညျကွောငျ့လားဆိုတာတော့ . . .